Ku caawinta dumarka Soomaaliyeed in ay Kala Mid noqdaan Ragga Dib-u-dhiska Soomaaliya – Danjire John Yates. – Radio Daljir
Maarso 11, 2011 12:00 b 0
8da Maarso, waxaanu u dabaal dagnay munaasabada 100-aad ee Maalinta Haweenka Aduunka, waa maalin Madaxweyne Obama uu ku tilmaamay in ay tahay dabaal dag loo samaynaayo dhaqaalaha, siyaasada iyo guulaha ijtimaaciga ah ee dumarku horay u gaareen, kuwa haatan ay gaareen iyo kuwa mustaqbalka. Waa waqtigii looga mahad celin lahaa haweenka dadaalkooda ay ugu jiraan ka qeybqaadashada arimaha bulshooyinkooda sida ragguba ay uga qeyb qaataan. Bulshooyinka maal galiya dumarka iyo gabdhaha waxaa ay guul ka soo hoynayaan heerar waaweyn oo dhanka horumarka dhaqaalaha, barwaaqada iyo xasiloonida siyaasada ah. Arintani waxay ka rumoowday Maraykanka, waxayna ka dhaboobi kartaa Soomaaliya. Waxaanu ku dhiiran nahay maalgalinta iyo taageerida haweenka Soomaaliyeed waxaanu u taageereynaa sidii in ay yihiin dad nala wadaagaya xasilinta iyo soo nooleynta Soomaaliya.
Soomaaliya gudaheeda oo dhan, qaar ka mid ah xerooyinka qaxootiga, iyo guud ahaan qurbaha oo dhan, dumarka Soomaaliyeed waxay ku howlan yihiin dhismaha nabadda iyo howlaha manfaca leh. Waxay maamulayaan isbitaalo, waxay helaan dakhli ay ku quudiyaan qoysaskooda, waxay kujiraan ganacsi, waxay maareynayaan ururo aan dowli ahayn waxayna sidoo kale hoggaaminayaan wasaarado dowladeed. Arinta ay haatan sidii ay ku xallin lahaayeen ku tala jiraan ayaa ah adkaynta iyo dhisida gacan ka geysashadooda sidii ay aad ugu sii xoojin lahaayeen dumarka Soomaaliya.
Maraykanku wuxuu si cad ugu dhiiran yahay taageerida dumarka Soomaaliyeed iyo sida ay gacan uga gaysanayaan nabadaynta iyo barwaaqeynta Soomaaliya. Waxaanu ku howlan nahay ururada haweenka oo aan ka taageereynaa dhisida nabadda waxaana taageereynaa taageerida dadaalada lagu kordhinaayo ka qeybqaadashadooda hannaanka siyaasada iyo kan xukunka. Waxaanu ka shaqeyneynaa sidii loo kordhin lahaa tirada gabdahaha iskuulada kusoo biira waxaana ku xoojinaa hablaha iyo haweenka tababaro xirfadeed iyo fursado shaqo.
Lixdan dumar ah oo ka socda Soomaaliya qeybaheeda oo dhan ayaa la tababaray sanadkii tagay waxaana tababar lagu siiyay soo helida sida ay yihiin iyo sababaha dagaalka waxaana sidoo kale la siiyay xirfado hoggaan, kuwo xiriir iyo kuwo kusaabsan dhisida kooxaha si sare loogu qaado xalalka nabadda.
Cawimaada Mareykanka ayaa sidoo kale waxay xoojisay awooda waxayna kordhisay kalsoonida tirada dumarka ah ee kujira baarlamaanka si dabadeed ay u cayaaraan doorar hoggaan oo intii hore ka weyn. Cawimaadeenu waxay keentay hirgalinta kooxda dumarka ah ee kujira baarlamaanka oo si firfircoon isugu dubaridaya shabakado ay leeyihiin bulshooyinka rayidka ah si markaa ay uga qeybqaataan wadahadalka siyaasadeed. Tani waa guul weyn oo soo hoyatay maadaama ay dumarka awood u siiso in ay tiradoodu ka korodho dhanka siyaasada Soomaaliya iyo dhanka fagaareyaasha go?aamada lagu soo saarayo.
Taageeradeenu waxay keentay in tiro intii hore ka badan oo gabdho ah ay wax ka bartaan iskoolada. Anagoo la xiriirayna Guddiyada Waxbarashada ee Bulshada ayaanu kordhinay tirada macalimiinta dumarka ah ee Soomaaliyeed waxaana iskuulada u dhisnay musqulo iyo meelo gacmaha lagu dhaqdo kuwaasoo gaar ahaan loogu tala galay gabdhaha Muslimiinta ah.
Waxaanu sidoo kale la shaqeyneynaa ururada xiriirka nala leh si aanu u hubino in dumarka iyo gabdhaha Soomaaliyeed ay helaan fursado la mid ah kuwa ragga iyo wiilashu u helaan tababarada xirfadaha iyo shaqooyinka. Kordhinta fursadaha shqo iyo kuwa dhaqaale ee gebi ahaan bulshada waxay kordhisaa awooda lagu barwaaqoobayo.
Arintan waxaa gaar ahaan loogu tala galay Soomaaliya, oo colaado, abaaro iyo xagjirnimo ay la dageen bulshooyinka.
Sida uu qoray Madaxweyne Obama, ?Si loogu guuleysto mustaqbalka, waa in aanu qalabayno dumarka da?da yare ee maanta kuna qalabayno aqoon, xirfado, iyo fursado isku mid ah sidii ay ku heli lahaayeen si loo gaaro ballan qaadka beri.? Mustaqbalku waa Soomaaliya nabad iyo barwaaqo ah arintaasoo lagu gaari karo in dhammaan Soomaalida oo dhami ka qeyb qaataan arinta-rag iyo dumar, wiilal iyo gabdho.
Dawlada Puntland oo goobo u cayimaysa dadkii ay hawgaladu saameeyeen.
Baahin: Khamiis, Mar 10, Weriye Khadar C. Ismaaciil …Xubno ka mid ah indheeragaradka gobolka Cayn oo ka diray dhagarta uu maleegayo maamulka Somaliland …Maamulka gobolka Cayn oo sheegay in colaadda Kalshaale aanay joogsanayn inta laga aasaayo baraagaha Kalshaale …Madaxa guddiga dib u dejinta ee Galgala oo sheegay in qoysaskii ka hayaamay Galgala ay badi soo laabteen …Indhaguran, wasiirka shaqarada & shaqaalaha ee Puntland oo sheegay in ay la-tashi la sameeyeen shacabka gobolka Mudug, tafaasiilna ka bixiyey heshiiskii Garowe ee Puntland & Galmudug …